Burma Partnership » The Spirit of 8888 Continues to Intensify: Joint Statement on the 23rd Anniversary of Burma’s 8888 People’s Uprising
By Assistance Association for Political Prisoners - Burma, Forum for Democracy in Burma, Nationalities Youth Forum, and Students and Youth Congress of Burma • August 8, 2011
Today marks the 23rd anniversary of the 1988 people’s uprising in Burma in which individuals from all walks of life throughout the country stood up and dared to speak out against the ruthless military regime. On this day in 1988, as many as 3,000 lives were lost when the regime responded to this people’s movement withabrutal crackdown. The efforts of those who perished trying to bring freedom to their country will not be forgotten.
The spirit that launched the 8888 movement lives on in the people from all over the country who have been active in opposing the successive military regimes, bravely showing their commitment to bringing about genuine democratic change in Burma. In addition to those who have lost their lives in the struggle for freedom, tens of thousands have been thrown into jail merely for the crime of openly expressing their desire for freedom, with 1,994 political prisoners currently being held in Burma’s notorious prisons.
The military regime continues to commit gross human rights abuses onadaily basis against its own people, which include extrajudicial killings, sexual violence and forced labor, among others. The military regime consistently fails to respect international humanitarian law and instead targets civilians in its wars against ethnic armed groups. As part of these wars the army has destroyed 3,700 villages in eastern Burma since 1996. War against ethnic groups, and the practice of targeting non-combatants and burning down villages, has forced tens of thousands of refugees to flee into neighboring countries and created more than halfamillion internally displaced persons (IDPs). The heinous human rights violations committed by the regime and its army are well documented and likely amount to crimes against humanity and war crimes.
In the six months since the military dominated parliament was convened, the situation has not improved and these crimes continue. Militarization, armed conflict, and displacement have increased in ethnic areas in eastern Burma. Rather than engaging in constructive dialogue with ethnic groups, the Burma Army increased attacks, leading to the breakdown of decades long ceasefires in Karen, Kachin and Shan States. This escalation of hostilities has caused at least 20,000 people to flee from their homes in Kachin State to the China border alone.
In 2008, the regime unilaterally adoptedaconstitution that grants members of the military regime immunity for the crimes they have committed in the past, as well as any they may commit in the future. Given that the culture of impunity for human rights abuses is now enshrined in law, Burma’s democracy and ethnic movement inside and outside the country have called on the United Nations to establishaCommission of Inquiry to investigate the crimes committed by the military regime. We believe thataUN-mandated Commission of Inquiry into crimes against humanity and war crimes in Burma is the most practical step forward to prevent more crimes, obtain justice for victims, and provideabasis for national reconciliation and sustainable peace in the country.
Burma’s democracy and ethnic movement also strongly rejects any attempt to prolong the military dictatorship in Burma including through the adoption of the 2008 Constitution and the holding of sham elections last year. The 2010 elections were broadly denounced by the international community as nothing more than an attempt to ensure the continuation of the military dictatorship under the guise of an “elected civilian government”. This “elected civilian government” continues to ignore the calls of the democracy movement led by Daw Aung San Suu Kyi and the ethnic nationalities for genuine dialogue aimed at achieving national reconciliation in Burma.
On the occasion of the 23rd anniversary of the 8888 people’s uprising, we call on the military regime:
1) To release all political prisoners immediately and unconditionally;
2) To cease all attacks on ethnic communities and democracy activists; and,
3) To hold inclusive tripartite dialogue with all stakeholders, with such dialogue to includeareview of the 2008 Constitution
Today, 8th August, also marks the 44th anniversary of the establishment of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Burma’s military regime has clearly shown its lack of concern for the welfare of its people, requiring ASEAN and the international community to take responsibility. They must call on Burma’s leaders to declareanationwide ceasefire and cease the attacks on ethnic communities. As witnesses to the crimes against humanity and war crimes being committed by one of their member states, ASEAN countries must also support the establishment ofaUN-led Commission of Inquiry.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma) – AAPP
Forum for Democracy in Burma – FDB
Nationalities Youth Forum – NYF
Students and Youth Congress of Burma – SYCB
Bo Kyi – +66 (0) 898 58 0674 (Joint Secretary of AAPP)
Naw San – +66 (0) 848 11 9594 (General Secretary of SYCB)
၈၈ စိတ်ဓာတ်ကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲစို့
ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံ ၂၃ နှစ့်ပြည့်အတွက် ပူးတွဲကြေညာချက်
သြဂုတ်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခု
ယနေ့သည် မြန်မာတပြည်လုံးရှိ ပြည်သူများမှ လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ရက်စက်ယုတ် မာသော စစ်အုပ်စုအား ရဲရဲရင့်ရင့်ပြတ်ပြတ်သားသား ရင်ဆိုင်၍၎င်းတို့၏ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ စတင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည့် ၈ လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံ ၂၃ နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ် သည်။ ထိုအရေးတော်ပုံတွင် စစ်အုပ်စု၏ ရက်စက်စွာ ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲမှုကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ၃၀၀၀ ခန့်ကျဆုံးခဲ့ ကြရကာ ထိုသူများ၏ပြင်းပြသော လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး စိတ်ဓါတ်နှင့် ကြိုးပမ်းမှုများကို ယနေ့တိုင် မည်သူမျှမမေ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။
ထိုအရေးတော်ပုံကြီးမှ ပေါ်ထွက်လာသော ၈၈ စိတ်ဓါတ်သည် တပြည်လုံးရှိပြည်သူများထံသို့ပျံနှံကာ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကို ထိုစိတ်ဓါတ်နှင့်ပင် အရေးတော်ပုံ အုံကြွမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်၍ ရဲရဲရင့်ရင့် အံတုတော်လှန်ခဲ့ကြသည်။ အရေးတော်ပုံများတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသူများအပြင် ထိုသို့ဆန္ဒထုတ် ဖော်ပြ ရုံမျှဖြင့်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရ သူပေါင်းလည်းထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ကာ ယခုလက်ရှိတွင် အကျဉ်းထောင်များထဲတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၉၉၄ ဦးရှိနေသည်။
စစ်အုပ်စုသည်တိုင်းရင်းသားဒေသထိုးစစ်များကို အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လျက်ရှိယုံတင်မကပဲ ထိုထိုးစစ် များအတွင်းတွင်လည်းဒေသခံ တိုင်းရင်းသားအရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားကာ တရားလက်လွတ် သတ်ဖြတ်မှုများ၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ၊ အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေမှုများ၊ ရွာမီးရှို့မှုများစသည့် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုလည်း နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ကတည်းကယခုအ ထိမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်နယ်စပ်တလျှောက်တွင်ပင်ကျေးရွာပေါင်း ၃၇၀၀ ကျော်မီး ရှို့အဖျက်ဆီးခံခဲ့ ရပြီးပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လဲ ထိုဒေသမှပြည်သူများသည် သောင်းချီသော ဒုက္ခသည်များအဖြစ်အိမ် နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးကြရယုံတင်မကပဲ တသန်းဝက်ခန့်ရှိသောသူများမှာ ရွာအနီးရှိတောများ ထဲတွင်လှည့်လယ်၍ ပုန်းအောင်းနေကြရသည်။စစ်အုပ်စု၏လူ့အခွင့်အရေးချုိုးဖောက်မှုများသည်အ ထောက်အထားများအရ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူသားမဆန်သော ဒုစရိုက်မှုများ အဆင့်သို့ပင်ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်သည်။
စစ်အုပ်စု၏ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အဖြစ် အတုအယောင်ပါလီမန်ခေါ်ပြီး ၆ လကြာခဲ့သည့်တိုင်လဲမည် သည့် အခြေအနေမှ တိုးတက်လာခြင်းမရှိပဲ ပဋိပက္ခများ၊ ပြသာနာများ၊ ဒုစရိုက်မှုများသာ ပိုတိုးလာ ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပြသာနာကို နိုင်ငံရေး နည်းဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေမရှာပဲ တဘက်သတ်ထိုးစစ် ဆင်ခဲ့သော ကြောင့် ကချင်၊ ကရင် နှင့် ရှမ်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာစွာရယူ ထားခဲ့သည့် အပစ်ရပ်ရေးသဘောတူညီချက်လဲ ပျက်ပြယ်ခဲ့ရကာ ပြည်သူအများဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရ သည်။ မကြာသေးမှိက ကချင် ဒေသထိုးစစ်များကြောင့် ဒုက္ခသည် ၂ သောင်းကျော်ခန့် တရုတ် နယ်စပ်သို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်။
စစ်အုပ်စု၏ တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လဲ ၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့ သော၊ ကျူးလွန်ရန်ရှိသော ဒုစရိုက်မှုအားလုံးအတွက် အကာအကွယ်ပေးရန် အတိအလင်းထည့်သွင်း ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လဲ မိမိတို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိဒီမိုကရေစီရေး နှင့်တိုင်းရင်းသားအ ရေးလှုပ်ရှားနေသော သူများက ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းပေးသော စုံစမ်းရေးကော်မရှင် သည် စစ် အုပ်စုကျူးလွန်ထားသော ပစ်မှုများကို သေသေချာချာ စုံစမ်းပေးနိုင် မည့်အပြင် နောက်ထပ် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုများမဖြစ်စေရန်၊ တရားမျှတမှုပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက်အခြေခံရရှိရန် နှင့် စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် လက်တွေ့ကျသည့် ခြေလှမ်း ဖြစ်သည်ဟုယုံ ကြည်သည့်အတွက် ထို စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မိမိတိုိ့ဒီမိုကရေစီရေး နှင့်တိုင်းရင်းသားအရေးလှုပ်ရှားနေသူများမှ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတုအယောင်အပါအဝင် မြန်မာပြည်တွင် စစ်အာဏာရှင်တည်မြဲရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေမှုမှန်သမျှကို အတိအလင်း ဆန့်ကျင်ကြောင်းသဘောထား ထုတ်ဖော်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သည် မရိုးသားမှု၊ လိမ်လည်မှု များဖြင့်သာ ပြည့်နှက်နေပြီး အရပ်သားအရေခြုံအ စိုးရအောက်တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှု သက်သက်သာဖြစ်သည်ဟု အပြည်အပြည်ဆိုင်ရာ မှရှုံချခြင်းကိုလဲ ခံခဲ့ရသည့်အပြင် ထိုအရပ်သားအယောင်ဆောင် အစိုးရမှလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံးမှ တောင်းဆိုထား သည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် စစ်မှန်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြု လုပ်ရေးကိုဆက်လက် လစ်လျှူရှု့ထားဆဲဖြစ်သည်။
ယနေ့ ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ၂၃ နှစ်ပြည့်အချိန်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့မှ စစ်အုပ်စုအားအောက်ပါအ တိုင်းတောင်းဆိုလိုက်သည်။
၁။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်း လွတ်ပေးရန်။
၂။ တိုင်းရင်းသားဒေသများရှိထိုးစစ်များနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများအပေါ် ဖိနှိပ်နေမှုများကိုချက် ချင်းရပ်တန့်ရန်။
၃။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သော သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြုလုပ်ရန်။
ယနေ့သည် အရှေ့တောင်အာရှနိင်ငံများအဖွဲ့ (အာဆီယမ်) စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၄၄ နှစ်မြောက်နေ့ လဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့တွင် အာဆီယမ်အဖွဲ့ကြီးအနေဖြင့် ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတခုဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံမှ စစ်ခေါင်းဆောင်မျာအား တတိုင်းပြည်လုံး ရှိ တိုင်းရင်းသားများအပေါ်ပြုလုပ်နေသော ထိုးစစ်များကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်ဖိအားပေးရန် နှင့် ၎င်းတို့ ကျူးလွန်နေသော စစ်ရာဇဝတ်မှုများ၊ လူ သားမဆန်သည့်ပစ်မှုများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂမှစုံစမ်း ရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း ရေးကိစ္စကို ထောက်ခံပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ အလေးအနက်တောင်းဆိုလိုက် သည်။
(၁) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) – AAPP (၂) မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု – FDB
(၃)တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအင်အားစု – NYF
(၄)မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလူငယ်များကွန်ဂရက် – SYCB
ကိုဘိုကြည် – + ၆၆ (၀) ၈၉၈ ၅၈ ၀၆၇၄ (တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုး၊ AAPP)
ကိုနော်စန်း – + ၆၆ (၀) ၈၄၈ ၁၁ ၉၅၉၄ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး၊ SYCB)
Tags: 1988 Uprising, 8888 Anniversary, Assistance Association for Political Prisoners - Burma, Burmese, Commission of Inquiry, Forum for Democracy in Burma, Nationalities Youth Forum, Students and Youth Congress of Burma